Noble Moe: 2011
စာဖတ်မိတ်ဆွေများ အသဲကွဲဖူးကြပါသလား ?
မိုးတော့ကွဲဖူးပါတယ် သေချာစဉ်းစားကြည့်မိရင် အသက် ၃ နှစ်ခွဲအရွယ်လောက်ကတည်းကပါ။
၁၅၀၀ နဲ့ပက်သက်ပြီးမှအသဲကွဲတယ်လို့ ခေါ်ရင်တော့ မိုးအသဲကွဲတယ်ဆိုတာ အသဲကွဲရာမမြောက်ဖူးဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ပြောချင်ပါတယ် ကလေးငယ်တစ်ယောက်တွက် မိဘဆိုတာ ကိုယ့်ကမ္ဘာပါ။
အဲ့ဒီအရွယ်မှာ မိဘနဲ့ခွဲနေရတဲ့တွက် အရမ်းကြေကွဲခံစားဖူးပါတယ်။ ဘယ်သူတွေဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း လိုအပ်ဆုံး အတောင်းတဆုံး ကတော့မိဘပါပဲ။
မိုးငယ်ငယ်တည်းက လူရှေ့ သူရှေ့မျက်ရည်ကျရမှာ ရှက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူကြီးတွေမသိခဲ့တာပါ။ သေချာသိတာကတော့ ခေါင်းအုပ်ကလေးပါပဲ။
ကျောင်းလွှတ်လို့ သူများမိဘတွေလာကြိုတာတွေ့ ရင် မောင်လေးတွေ ညီမတွေတွေ့ ရင်ငေးမောနေမိပါတယ်။ အဓိက ငွေကြေးချမ်းသာတာထက် မိသားစုဆုံညီနေခွင့်ရတာကို ပိုမြတ်နိုးတယ် ပိုလိုအပ်တာပါ။ အဲဒီမှာ အတွေးက တခုခုကိုခင်တွယ်မိရင် ခွဲရမှာကြောက်လာလို့ လူတိုင်းကိုအရင်းနှီးရဲတဲ့စိတ်ဖြစ်လာခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခက်တာက စိတ်မပါရင် ရီတောင်မပြတတ်တဲ့သူပါ။ခင်ဖို့မပြောပါနဲ့ အဲ့လိုလူစားထဲမှာမိုးပါ ပါတယ်။
ကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ခံစားတာဘာမှမဟုတ်လောက်ဖူးဆိုပြီးထင်မိမလား မိုးအဲ့ဒီခွဲခွါနေရခြင်းတွေ အတော်ကြောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ခုခုဆို ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အမြဲသိချင်တတ်တဲ့မိုး ကတော့ ဘဝရဲ့ဝဋ်ကြွေးကြောင်းအနည်းငယ်သိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဝဋ်ကြွေးတို့ငရဲတို့ကိုတကယ်ကြောက်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု အဓိကပြောချင်တာကတော့ မိမိကိုယ်အဆုံးစီရင်ခြင်းပါ။
မိုးကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်။ ၂ ကြိမ်ပါ။ တစ်ကြိမ်က မသေတာ နောက်၁ကြိမ်က တွေးပေမယ့် အဖြစ်မြောက်ခဲ့တာပါ။အဲလိုခပ်ညံ့ညံ့စိတ်ရှိခဲ့လားပြောတယ်ဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ် ဝန်ခံပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီချိန်မှာ လုံးဝလွတ်မြောက်သွားချင်တာပဲရှိခဲ့တာ။လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားချင်တာအတွေးဒါပဲရှိနေတာပါ။
တစ်ကြိမ်ကတော့ မိသားစုတင်းကြပ်မှု ကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် မိဘနဲ့သားသမီးမှာလည်းနားလည်မှူဆိုတာအများကြီးလိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မိဘတွေကဖြစ်ချင်တာပဲသိတဲ့ချိန်ပေါ့ မိဘစေတနာကိုပြည့်ဝလက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရာရာကိုယ့်စိတ်မပါရင် အသက်ရှင်ရတာ ပင်ပန်းပါတယ် မိမိစိတ်နဲ့ တခြားကိုယ်ဖြစ်နေသလိုပါပဲ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့အိမ်ကထွက်ပြေးဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဖူး သေဖို့ပဲထွက်ပေါက်တွေးမိတာကြောင့်လည်းဖြစ်သွားခဲ့မိတာပါ။ ဒါကြောင့် နောင်ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူတွေကို သူတို့ ဘာဖြစ်ချင်လဲ အဲဒီနောက်က နည်းနည်းလိုက်တည့်မတ်ပေးလိုက်တာပဲရှိတယ် ထိန်းချုပ်ဖို့ ဘာမှမစဉ်းစားတော့တာပါ။ ဒါတွေကိုနားလည်သိခွင့်ရခဲ့တာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
နောက်တစ်ကြိမ်ကတော့ စင်္ကာပူမှာ အလုပ်မရလို့ ပြန်ရရင် ရှက်လို့ ပြန်ရမယ်ဆို မပြန်ခင်မှာ သေဖို့ စဉ်းစာခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒါကတော့အကောင်ထည်မဖော်လိုက်မိပါဖူး။ ဒါကြောင့် သေဖို့တွေးတဲ့သူတွေကို အရမ်းလည်းကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ အဲဒီချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်က ခံစားချက်ကိုလွတ်မြောက်ချင်တာ တစ်ခုပဲသိတာပါ။ အဓိကတော့ ကိုယ်ပြန်ရင် ဝိုင်းကြည့်မယ့်အကြည့်တွေမခံနိုင်တာပါ။ ဒါတောင် မိသားစုတွေက အမြဲဖုန်းဆက်အားပေးနေတဲ့ကြားကအဲလိုစဉ်းစားခဲဖူးသေးတာပါ။နိုင်ငံခြားသွားကတည်းက နိုင်ငံခြားကိုအထင်ကြီးတယ် တခြားလည်းအမျိုးမျိုးပြောတာကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်နေရာ ရောက်ရောက်ပါ မိမိစိတ်သာဓိကပါ။ ဒါတွေက ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအရမ်းဂရုစိုက်မိလို့ လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိုးလူတစ်ယောက်ခံစားသွားမှာအရမ်းကြောက်ပါတယ်။ တဖက်ကမှားရင်တောင် ပြန်ုမပြောချင်တာက တဖက်သားရှက်သွားမှာဝမ်းနည်း သွားမျာတကယ်စိုးရ်ိမ်လို့တကြောင်းနောက်ကိုယ့်အကျင့်ကိုက ပြောမိလိုက်ရင်အဲဒါတနုပ်နုပ်နဲ့ခံစားရပါတယ်။ တခုခုများကိုယ့်ကြောင့်ဖြစ်သွားမယ်ဆို ဘယ်လိုပေးဆပ်ပေးဆပ်ရ ကိုယ့်ကိုုကိုယ်ခွင့်လွတ်မိမှာမဟုတ်ဖူး။ နောက် တုန့်ပြန်မှူတိုင်းမှာသက်ရောက်မှူရှိတာလည်း ကြောက်လို့ပါ။ တစ်ခါတစ်လေ ကြောက်တယ် အတယ်ထင်တတ်ကြပါတယ် တကယ်တော့ မိုးကြောက်တာ သံသရာလည်ဝဋ်တွေကိုကြောက်တာပါ။
ဒါကြောင့် လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ချိန် ဘာလို့များကိုယ့်အချိန်တွေဖဲ့ပြီး သူများဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ကြအုံးမှာလည်း နှစ်ဖက်လုံးအကျိုးမရှိမှတော့ လေ…
အလုပ်အကိုင်အဆင်မပြေတဲ့မောင်နှများလည်း အားငယ်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်။ ခုလက်ရှိလည်း အဆောင်မှာအလုပ်လာရှာရင်းအဆင်မပြေတော့ သွေးရူးသွေးတန်းအတွေးတွေချော်နေတာကြည့်ပြီး ရင်ထဲမကောင်းပါဖူး တချို့ ကိစ္စတွေက လုံးဝကိုယ်တိုင်ကူညီလို့ မရတဲ့ခြေနေမှာ အကောင်းဆုံးနားချပေး မယ် ဆုတောင်းပေးယုံကလွဲလို့ ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့ အခြေနေမျိုးတွေ လည်းရှိပါတယ်။
“လဲရင်ပြန်ထ ဒါလူ့ ဘဝပဲတဲ့”
အဆင်မပြေရင် သမီးချိန်မရွေးပြန်လာခဲ့ အမေတို့ ငွေပဲရှုံးခံနိုင်တယ် လူတော့အရှုံးမခံနိုင်ဖူးပြောခဲ့တဲ့အမေ့စကားတွေ ဘဝမှာအခွန်အားရှိရှိနဲ့ဆက်လျှောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အလုပ်ကိုင်စီးပွါးရေးတွက် စိတ်ဓါတ်ကျနေသော မောင်နှများကို တစ်ခုမှာချင်တာက အားတင်းပြီးသာကြိုးစားပါ စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့ ပန်းတိုင်ဆိုတာလျှောက်နေသူတွက်ပါ။ ဘဝကိုသတ္တ်ိရှိရှိရင်ဆိုင်လိုက်ပါ လုံးဝအရှုံးမပေးလိုက်ပါနဲ့နော်….
နောက်တစ်ခုကတော့ မိုးကိုယ်တိုင်တိုင် မလှုပ်ချင်လို့ဒီတိုင်းလေးနေနေတာပါ။
ဒါပေမယ့် ပြောရမှာပါပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ မိုးမောင်နှမတွေလည်းအရွယ်ရောက်လာတော့ ဘေးနားမှာ သူတို့ခံစာချက်လေးတွေနားထောင်ပေးရင်း ဝိုင်းပြီး ကူစဉ်းစားပေးရင်း မမှားအောင်ဘေးနား မှာနေပေးချင်မိပါတယ်။ အဝေးရောက်နေပေမယ့် ဘာပဲခံစားခံစား မမကြီးကိုပြောပါ။ မိဘတွေ ဘဘောမတူနိုင်ခဲ့ရင်တော့မမကြီး ကူပြောပေးမယ်နော် အမဆိုပြီးမကြောက်နဲ့ ပြောစရာရှိတာကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုသဘောထားပြီးပြောလို့ရတယ် အမြဲပြောပါတယ်။ အဓိကတော့ သူတို့လေးတွေ အတွေးခေါ်မှားမှာ လမ်းလွဲသွားမှာဆိုးလို့ပါ။ အကုန်သိပြီးတော့ တစ်ဖက်ဖြစ်ချင်တဲ့ပေါ်မှာ သေချာအဆင်ပြေနားလည်အောင်လုပ်ပေးဖို့လည်းလို့ပါတယ်။
အသဲကွဲတယ်ဆိုတာ မိသားစုတွက် မိသားစုနဲ့ခွဲနေရဖူးလို့ အတော်ခံစားဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည် တစ်ခုခုကိုယ် မနှောင်ဖွဲ့ မိအောင် အမြဲဂရုစိုက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မမြင်ရမကြားရတဲ့ကိလေသာ သူဟာသူငြိမ်း၏တဲ့ အဲ့အတိုင်းယူဆပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း တခုခုဆို တအားတွေးပါတယ်။ အဲလိုတွေးလွန်းလို့လည်း ဒီတိုင်းနေဖြစ်တာပါ။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း မိသားစုဆွေ မျိုးမောင်နှမသူငယ် ချင်းတွေတွက် အချိန်ပေးဆိုပေးနိုပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုထိခိုက်မယ့်တစ်စုံတစ်ရာ ခံစားချက် ခံစာမည့်အချိန်ကိုတော့ သူများကိုလည်းမပေးချင်သလို ကိုယ်တိုင်လည်းမယူချင်ပါဖူး။ဒါကြောင့်လည်း ကြိုတင်ကာကွယ်ဆေးတွေပေးမိပါတယ်။ မိုးအရမ်းအားနာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုကိစ္စတွေကျ အားနာတာ တစ်ဖက်သားကိုပိုနစ်နာစေတယ် ယူဆပါတယ်။ ရက်စက်တယ် ပြောပြီး ပြတ်ပြတ်သားသားလှည့်ထွက်သွားနိုင်တာ တဖက်သားတွက် မထိခိုက်ပေမယ့် မိမိအပျင်းပြေဖို့ လိုတာခိုင်းဖို့အသုံးချဖို့ တွက် သူတဖက်သားအချိန်နဲ့ဘဝတွေခိုးယူချင်းကြောင့်သာ လူတွေသေဆုံး သွားရူံးသွပ်သွားလောက်တဲ့အဖြစ်တွေရှိတာပါ။
ကိုယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်း သူများအပျင်းပြေဖို့အသုံးချခံ ဘယ်သူများဖြစ်ချင်တဲ့သူရှိပါ့မလဲနော်။လိုအပ်ရင်သာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရာရာဆိုပေမယ့် ကိုယ်ကိုကိုယ်တော့အပိုအဖြစ်မခံနိုင်ကြပါဖူး။
ဒါကြောင့်မိုးမောင်နှမတွေကိုလည်း အမြဲပြောဖြစ်တာ တစ်ခုခုကိုဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုသေချာစဉ်းစားပါ။ အထပ်ထပ်သေချာစဉ်းစားပါ။ နောက်ဆုံးကိုယ့်ဘက်က လုံးဝဆုံးရှုံးသွားတော့မယ့်ထိပါစဉ်းစားပါ ။အဲလိုခြေနေထိလက်ခံနိုင်တော့မှ သေချာအဖြစ်လောက်ပဲမဟုတ်ဖူး လက်တွေ့ ဖြစ်လာမည့်နေထားမျိုးကိုစဉ်းစားပါ။ ပြီးမှာလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင် တော့မတားတော့ပါဖူး။
ဥပမာ ဒီလူ အသောက်စားမကင်းဖူးဆိုပါတော့ ကိုယ်နဲ့ယူရင်တော့ကင်းသွားမှာ တွေးပြီးလက်ခံရင်တော့မိုးကမှားတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ယူလည်း သူသောက်စားအုံးမယ် တွေးပြီးလက်ခံနိုင်တဲ့ထိစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ ဒါမှကျေနပ်ရင်တော့လည်းလက်ခံပေါ့။ သောက်စားတိုင်း လည်းပျက်စီးနေတာလို့ မဆိုလိုပါ။ ငယ်ငယ်ကတော့ အရက်သောက်တာဆို တကယ်လန့်တယ် မကောင်းဖူးဆိုပေမယ့် တချို့ သောက်တာ တဖက်သားတွက်ဒုက္ခမပေးဖူး ဒါပေမယ့်သူ့ကိုယ် ကြည့်တဲ့သူတိုင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ ဦးလေးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သူ့ ချစ်သူနဲ့ကွဲသွားတာ ဘယ်မိန်းကလေးကိုမှစိတ်မဝင်စားတော့ဖူး အရက်ကသူ့ တွက်ဖြေသိမ့်ဆေးလိုယူဆတော့ အပေါင်းသင်း တွေလည်းတားမရ အားလုံးရှောင်ခွါ မြင်ရတာစိတ်မချမ်းသာစရာပါ။
နောက်တစ်ခုက လူ့ ရဲ့ ကံဆိုတာကမမြင်ရပါဖူး အခြေနေကြောင့် အိမ်ထောင်ရှင်များအလုပ်မလုပ်နိုင် တော့လို့ ကိုယ်ကရှာကြွေးနိုင်ရမယ်။ကံကြောင်းမလှခဲ့ရင်တို့ဖောက်ပြန်ခဲ့ရင်တို့ ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆို ပစ်ထား ခဲ့မယ် ဆိုရင် ဘဝကိုအဲ့လိုချိန်မှာ တစ်ယောက်တည်းရင်ဆိုင်နိုင်လား သားသမီးတွေတွက် ဘဝကိုမားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးနိုင်လား ဒါတွေအားလုံးစဉ်းစားပြီးမှပဲ တစ်ခုခုကိုဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။ အရမ်းတတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဖူး မိုးစဉ်းစားသလောက် မိုးမောင်နှမတွေကို အမြဲပြောမိတာလေးပါ။
ကိုယ်တိုင်လည်း ဘယ်လိုခြေနေမျိုးမှာလူတစ်ယောက်ကိုလက်ခံမိမယ်တော့မသိပါဖူး။ ကိုယ်သိပ်မြတ်နိုးခဲ့ မယ်ဆိုရင်ပေါ့ ဘယ်လိုအခြေနေမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ် မပစ်ရက်ဖူး ဆိုရင်တောင် သစ္စာမရှိတဲ့သူ ဆိုရင်တော့ လွတ်လပ်စွာပဲ ခွင့်ပြုလိုက်မှာပါ။ အဲလိုခြေနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ အဲလူရှေ့ ကပျောက် ကွယ်သွားမိမှာပါပဲ။ လိုအပ်ရင် နှလုံးပဲခွဲလှူပေးရပေးရဆိုပေမယ့် အပိုဖြစ်မယ့်သူတွက်တော့ အသက်မဆုံးရှုံးမှာမဟုတ်ပါဖူး။
အခုတလောမြင်နေကြားနေတဲ့ မြင်ကွင်းတွေဟာ ရင်ထဲအတော်မကောင်းပါဖူး။ လတ်လတ်ဆက်ဆက် အသဲတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့မြင်ကွင်းတွေ အသဲကွဲပြီးအိပ်မပျော်ဘာမီတွန်သောက် ဒုက္ခတွေရောက် နေတဲ့မိန်ခလေးတွေ အသက်စွန့်သွားတဲ့သူတွေကြည့်ရင်း သူများပါးစပ်ထဲလမ်းမဆုံးစေနဲ့ဆိုတဲ့ဆုံးမ စကားတွေဟာ အရမ်းမှန်ပါလား တွေးမိပါတယ်။
ဒီလိုတွေးလို့အပျိုကြီးဖြစ်သွားရင်တော့ မိုးတရားခံတော့ပြောကြတော့မှာပဲ။မိုးကတော့ ခုလိုတစ်ယောက် တည်း ဘဝလေးမှာအေးချမ်းတယ် ဒီအေးချမ်းမှုလေးအတိုင်းပျောက်ပျက်မှုမရှိဖူးဆိုရှေ့ ဆက်ပါ။ အားလုံးကောင်းမယ်ထင်လို့ ရှေ့ ဆက်ကြတာပါပဲနော် ။ ဒါကြောင့်အားလုံးပဲမိမိဘဝရဲ့ အချစ်စံအိမ်လေးကို မိမိကိုယ်တိုင်ရော သူတပါးအပါဝင် ကံသုံးပါးနဲ့ မပျက်စီးနိုင်ပဲ စိတ်အေးချမ်းမှူပြည့်စုံသော ဘဝခရီးဖူးစာမှန်များနှင့်သာစုံကြပါစေလို့တောင်းဆုပြုပေးပါတယ်။
အားလုံးမိမိကိုတကယ် မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့တန်ဖိုးထားပြီးချစ်ပြီး မေတ္တာကိုသစ္စာနဲ့တည်ဆောက်နိုင်တဲ့သူများနဲ့ဆုံကြပါစေ……
Posted by noblemoe at 1:17 PM 13 comments:
သား …….. သားအလုပ်မသွားခင် အဖေစကားနည်းနည်းပြောစရာရှိတယ် သား …
အဖေသတင်း တချို့ ကြားပြီး သားတွက်စိတ်ပူသွားတယ်…သား
မဖြစ်ဖို့ ပဲအဖေမျှော်လင့်မိတယ်။ သား….. သားကိုအဖေတစ်ခုပဲ ပြောချင်တယ် သနားတာ ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ ရင်းပြီးတော့ မသနားလိုက်ပါနဲ့ သား…
သား သနားလို့ ဆိုရင် လွတ်လပ်စွာလှူခွင့် ထောက်ပံ့ခွင့် အဖေပြုတယ် ဒါပေမယ့် မဖြစ်သင့်တာကိုတော့ သားသိတယ်နော်…
သား၏ ဘာမှမတုန့်ပြန်မှူကြောင့် ကျနော် ရင်တွင်းအလွန်ပူလောင်လွန်းလှသည်။
ဟာ…… ဦးလေး ………………. လာလာ ဦးလေး ထိုင်ပါ။
လမ်းကြုံလို့ လား ….
တူမကြီးဆီလာခဲ့ တာ …….
သူမ မျက်နှာ တစ်ချက်ပျက်လျှက် …
အော် ဟုတ်လား ဦးလေး
ခဏနော်ဦးလေး တစ်ခုခု သွားစီစဉ်လိုက်အုံးမယ် …
ဘာမှမလုပ်နဲ့တော့ တူမကြီး ဦးလေး နေသိပ်မကောင်းဖူးကွယ့် 
စကားနည်းနည်းပြောချင်လို့ ပါကွယ် …
ပြောရမှာ အားတော့နာတယ် …တူမရယ်
တို့ တွေက တစ်လမ်းတည်းသားတွေမဟုတ်လား
ငါတူမ ခင်ပွန်းနဲ့ ကလည်း ဦးလေးတို့ မိတ်ဆွေရင်းတွေပဲလေ
တုမကြီး … တူမကြီးကိုလည်း ဦးလေး တူမတစ်ယောက်တစ်ယောက်လိုပါပဲ။
တူမ ဘာခက်ခဲလိုလို ဦးလေးတို့ က ကူညီဖို့ အဆင့်သင့်ပါကွယ် ….ဒါပေမယ့် တူမရယ်
ဦးလေး သားနဲ့ ငါ့တူမ သတင်းမဟုတ်ပါစေနဲ့ ဦးလေးမျှော်လင့်မိတယ်။
ဦးလေးသားဦးကိုတော့ ……..တောင်းပန်ပါတယ် ငါတူမ ဆန္ဒတွေစောသွားတယ်။
တူမလည်း မိခင်တစ်ယောက်ပဲလေ နားလည်မှာပါ….
ဦးလေး စိတ်ချပါ ကျမတို့ က ရိုးရိုးသားသား မောင်နှမလိုခင်တာပါ။ ဦးလေး သားကိုလည်း ကျမက မောင်လေးတစ်ယောက်လိုပဲ သဘောထားမိပါတယ်။
စိတ်ချပါဦးလေး ကျမ ဦးလေးထင်သလို ဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဖုူး ကတိပေးပါတယ်။
အေးကွယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါ့ တူမရယ် ဖခင်တစ်ယေက်အနေနဲ့ ရင်ထဲပူလောင်မူကို နားလည်ပေးပါ။ ငါ့တူမလည်း မိခင်ပဲ မိဘတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်မှာပါ။ ဦးလေး ယခုလိုပြောရတာ အလွန်အားနာပါတယ် ငါ့တူမရယ် ခွင့်လွှတ်ပါတယ်။ တူမပေးတဲ့ကတိကြောင့် ဦးလေးစိတ်ချသွားပြီ …
ဒီနေ့ သား အိမ်ပြန်နောက်ကျလိုက်တာ ………..
မရောက်သေးဖူး ဖေကြီးရယ် ဒီကလေး ဒီလောက်တစ်ခါမှနောက်မကျဖူးဖူး နော်
ဖေကြီး ရှင့်ကြည့်ရတာ တခုခုဖြစ်နေသလားလို့ 
၁၀ နာရီထိုးနေပြီ ကျမသားလေး တစ်ခုခုများဖြစ်နေပြီလား ကျမရင်တွေပူလိုက်တာ ဖေကြီးရယ်
ဟာာာ ဦးလေး မိုးချုပ်လှချေလား အေးကွဲ့ခုထိမောင်မောင် အိမ်ပြန်မရောက်သေးလို့ 
ဦးလေ ဒီနေ့ မောင်မောင်တစ်ယောက် အလုပ်မတက်ဖူး ကျနော်ကခုမေးမလို့ ….
ဦးလေးကို ကူညီပါကွာ ငါ့သားကြီးကို ဆေးရုံတို့ဘာတို့ များရောက်နေလို့ လာ့း မဟုတ်ဖူး ရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားရမယ် လူပျောက်နေတာ…
တစ်လကြာပြီးနောက် မေကြီး ဆန်ပြုပ်လေးတော့ ဝင်အောင်စားပါ။
ဖေကြီး ကျမသားကြီးကို မြင်ချင်တယ် ရှင်လိုက်ရှာပေးပါ...
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ အမေ့သားကြီးရယ် …
မငိုပါနဲ့ တော့ ဖြစ်လာမှတော့ ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ
တို့ သားကြီးက သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတာလေကွယ်
ငါတို့ တွေ့ နိုင်မြင်နိုင်တယ် ဒါငိုစရာမဟုတ်ဖူး
မခံစားလို့ ပြောတာမဟုတ်ဖူး ရှင်မ အစတည်းမ သားကြီးကိုလည်းဆုံးမပြီးပြီ
နောက်ဆုံး မဟူရာကိုလည်း သွားတောင်းပန်ထားပြီးပြီ
မင်းသားမှာ ဝဋ်ကြွေးပါလာလို့ပဲသတ်မှတ်ရတော့မှာပဲ ....
မိဘနှစ်ဦး၏ ရင်ကွဲမတက်ငိုသံများ ကြားရသူပတ်ဝန်းကျင်အဖို့ ….
သားတစ်ယောက် ခက်ခဲသောဘဝကို ရုန်းကန်နေသည့်သတင်းကလည်း ရင်ထဲမအေး
ငါးနှစ်ကြာပြီးနောက် ဖခင်ဆုံးသွားသော် မောင်နှများကိုကြည့်ရင်း အကိုကြီးဆုံးတစ်ယောက်အနေဖြစ် မိဘပေါ်တာဝန်မကျေခဲ့မှူ မောင်နှများပေါ်တွင်လည်း မစောင့်ရှောက်နိုင် မိမိတည်ထောင်လိုက်သော မိသားစု မိန်းမဘက်မှပါလာသော သားသမီးများ မိမိ သားသမီးအားအလုံအလောက်ထားနိုင်ရန် အလျှင်မှီအောင်ရုန်းကန်နေရသည်။ မောင်နှမမျးကို ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်သော်လည်း မည်မျှမှမတက်နိုင်ချေ။
ကြိုးစားမှူကြောင့် အတော်အသင့် အဆင်ပြေလာသော်လည်း သားသမီးများအား နောင်ရေးတွေးမိသဖြစ် ဒီထက်ပိုကြိုးစားရမည် တွေးမိသည်။ ထို့ ကြောင့်နိုင်ငံခြားထွက်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ငါးနှစ်နောက်ပိုင်း ပြီးပြည့်စုံသည်မဟုတ်သော်လည်း အတော့်သင့် ပြည့်စုံသော အနေထားသို့ ရောက်လာသည်။ထို့ ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံပြန်ပြီး အခြေချရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ိုထိုချိန်ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာသော သတင်းကြောင့် အထိပ်အလန့်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ရန်ကုန်ပြန်လျှင်နေစရာ အိမ်မရှိတော့ အိမ်ကိုအကြွေး ရှင်များသိမ်းလိုက်ခြင်း သိန်းပေါင်း များစွာအကြွေးဖြစ်ဝိုင်းနေသော သတင်းမှာ ဘယ်လိုမှနားမလည်နိုင် လက်မခံနိုင် သို့သော် အားလုံးဟာ အမှန်တရားများဖြစ်နေလေသည်။လိုလေသေးမရှိအောင်ထားလျှက် ယခုလိုခြေနေသည် ရန်ကုန်ပြန်လျှင် မဖြစ်နိုင်သဖြင့် ရင်နင့်စွာပင် တိုင်းတပါးတွင်ကြိုးစားရအုံးမည်။ အရာရာကိုသူများထက်အဆမတန်ကြိုးစားရသည်။ အိမ်တစ်လုံးဖြစ်ဖို့အကြွေးဆပ်ရန် သားသမီးများ တွက် …
သည်လိုနှင့် နောက်ထပ်ငါးနှစ်ကုန်ခဲ့ပြန်ပြီအကြွေးရှင်းပြီး နေစရာ တိုက်ခန်းလေးတစ်လုံးသာ အဖက်တင်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်သော် မြင်ကွင်းမှာ ရင်နှင့်ဖွယ်…..
ရှိနေသော တိုက်ခန်းလေးသည်ပင် အပိုင်မဟုတ် အမှားတစ်ခုကို အထပ်ထပ်မှားနေသော်လည်း ဇနီးအား တစ်ချက်မဆုရက် သဖြင့် မည်သည်မှမမေးမိ နှတ်ပိတ်လျှက်…. အတူကြိုးစားလာသော သူငယ်ချင်းများမှာ ပြီးပြည့်စုံပြီ အရာရာအခြေတကျ တချို့ လည်း ရာထူးကြီးများဖြစ် တချိုလည်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ ….
သားသမီးများ နောင်ရေးသည်လည်း မခိုင်မာမရှိ မဖြစ်ချေ နောက်တစ်ကြိမ်တော့ နိုင်ငံခြားပြန်ထွက်မှဖြစ်မည် ဒီတစ်ခါတော့ နောက်ဆုံးပဲ နောင်တော့ ဘယ်တော့မှာ နိုင်ငံခြားမသွားတော့ဖူး သားလိုသောတာလုပ်ပေးပြီးရင် ရန်ကုန်မှာပဲ အခြေခြတော့မည်။
၂ နှစ်ဟုမှန်းထားသော်လည်း ဘာလိုလိုနှင့် ၃ နှစ်ရှိခဲ့ပြီ ဘာဖြစ်ဖြစ် အိမ်ရှိပြီ သားတွက် လုပ်ချင်သော လုပ်ငန်းတွက်လည်းအရင်းအနှီးရပြီ အိမ်ပြန်ဖို့ တစ်ပတ်ပဲလိုတော့ သည့်ပျော်ရွှင်ကို စဉ်းစားရင်း ပျော်နေမိသည်။
ဦမောင်မောင်တို့ အိမ်ကပါလား ..
ဦးမောင်မောင် ရုတ်တရက် ဦးနှောက်သွေးကြောပျက်ကာ အသက်ဆုံးသွားကြောင်း …..
လောကကြီးက သူ့ အားမကြည့်ရက်သောကြောင့်လား ဘဝတွင် ထိုအမျိုးသမီးနှင့် လက်ထက်မိသည့်နေ့ မှစ သေဆုံးချိန်ထိ သူမအားအကောင်းဆုံး မဆူရက် မမေးရက် သူမပြုခဲ့သောအမှားများကို ရှင်းရင်း ဘဝတစ်ခုသေဆုံးခဲ့ပြီ
တဖက်မှာတော့ သူမသည် သူမ၏ စရိုက်မပျောက်ပျက်နိုင် ....
သားသမီးများမှာလည်း မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေသောကြောင့် မပြောရက် မဆိုရက် ဘဝတွေဟာ ကြေကွဲစရာ ….
မှတ်ချက် ။ ။ နာမည်များကို အဆင်ပြေသလိုမိမိစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုထားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ အမည်များတိုက်ဆိုင်မှူတစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင်ခွင့်လွှတ်ကြပါ။
မေတ္တာဆိုတာ ဘာလဲ မေးခဲ့ရင် စကားလုံး တစ်လုံးတည်းဖြစ် ပြည့်စုံပြောဖို့မိုးမှာမအရည်ချင်းမရှိပါ။ ကြီးမြတ်လှသော မေတ္တာတရားကို ကိုယ်တိုင်ခံစားမိသလောက်သာရေးခြင်းပါ။
လူသားတိုင်းမှာ မေတ္တာမရှိခဲ့ဖူးသူ ရှိပါ့မလား မရှိနိုင်ပါဖူးလို့ ယူဆမိပါတယ်။မွေးကတည်းက စပြီး တွယ်တာမိကြတာ မိခင်၊ ဖခင်ပါ။ ဘာမှအားစိုက်စရာမလိုပဲ သူ့အလိုလိုကို မိဘနဲ့ သားသမီးတွေကြားကမေတ္တာတွေသူ့အလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့မြင်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်ကတော့ တခုခုဆို လူတွေက သြော်ဒါမိဘမေတ္တာဆို ကိုယ်တိုင်လည်း သံရောင်လိုက်မိတာပါ။ သေချာလေးနက် မတွေးမိဖူး လေးလေးနက်နက်လည်း သိချင်တာမရှိခဲ့ဖူးပါဖူး။ကိုယ်တိုင်တော့ မိဘတွေကိုယ့်ပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာကို သိပ်နားမလည်ခဲ့ဖူးလောက်အောင် ညံ့ခဲ့ဖူးတယ်။ မိမိထက် အငယ်တွေကို ပိုပြီးဂရုစိုက်သလို ခပ်ညံ့ညံ့အတွေတွေးလည်းရှိခဲ့ဖူးတာပါ။မိဘတွေက တခြားသူများသားသမီးတွေများ ပေါင်ပေါ်တင်မိ ချီမိရင် မိုးတော့ငိုလို့ မဆုံးနိုင်ခဲ့ဖူး။ဒါကတော့အသက်ဆယ်နှစ်အောက်အချိန် ကခံစားချက်တစ်ခုပါ။
မိဘဆိုတာ သားသမီးတွေတွက် လိုတရအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနေရတာကို ပျော်နေရှာ တတ်တာပါ။ဒါတွေအားလုံးကလည်း ကိုယ့်မောင်နှမတွေကို ကိုယ်ကလုပ်ပေးမိတဲ့ချိန် မိဘကိုတစ်ခုခုလုပ်ပေးမိချိန် ကိုယ်တိုင်ခံစားမှပိုနားလည်လာရတဲ့ ခံစားချက်တစ်ခုပါ။ကိုယ်တိုင်ကလည်း ငယ်ငယ်ကတော့ တခုခုဆို မိဘတွေကို မကြိုက်လို့ မိဘတွေကိုကြောက်လို့ မိဘမကြိုက်တာ မလုပ်ခဲ့ဖူးတာပါ။
ဒါပေမယ့် ခံစားချက်ဆိုတာ အသက်ရွယ်နဲ့လိုက်ပြီးပြောင်းလဲလာတတ်သလိုပါပဲ။ကြီးလာလေလေ မိဘကိုကြောက်လို့ မိဘမနှစ်သက်တာ မလုပ်တာမဟုတ်ပဲ ဒါလေးလုပ်မိရင် မိဘတွေ စိတ်ဆင်းရဲသွားမလား ဆိုတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်လာခဲ့တာ ဒါပေမယ့် မိဘရှေ့ မှာရော ကွယ်ရာမှာပါ မိဘမနှစ်သက်မယ့် ခံစား မယ့်စိတ်ပျက်စေမယ့်အရာမျိုးတွေရှောင်တတ်လာပါတယ်။သို့ သော် အရာအားလုံးလား ဆိုတော့ မဟုတ်ပါဖူး ကိုယ်လုပ်လိုက်လို့ ဘာမှမထိခိုက်လောက်တဲ့အရာဆို လုပ်တာပါပဲ ဥပမာ ဆံပင်အ ရောင်ဆိုး တာမျိုးပါ။ အဲဒီမှာ တစ်ခုသိလာတာက မေတ္တာဆိုတာ တစ်ဖက်ကိုထိခိုကအောင်လို့်ဖို့ ဝေးပါတယ် နည်းနည်းလေးမှ မျက်နှာမညိုးစေချင်ဖူး ဥပမာ အဖေတစ်ခုခုခံစာနေတာ မြင်မိရင် ကိုယ်တိုင်ကြေကြေကွဲကွဲ ခံစားခဲ့ရဖူးပါတယ်။အဖေမသိအောင် ကြိတ်ငိုခဲ့ရတာ ဒီခံစားချက်တွေက အပြန်အလှန်မိဘနဲ့သားသမီးတွေမှာ အမြဲရှိတတ်ကြစမြဲပါ။
မောင်နှမတွေဆိုလည်း ဒီလိုပါပဲ တခါက မောင်လေးကတစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ သူနဲ့ခမျာ ညီမတွေအမတွေနဲ့ဆော့ ပျင်းရင် သူ့ ကိုတစ်ဆယ်ချက်ထိုး သူတစ်ချက်ပဲထိုးမယ်ပေါ့ မိုးလည်း ထိုးတမ်းမကစားချင်တော့ ထိုးရင်းမကစားချင်တော့ တာနဲ့ မောင်လေးရင်ဘတ်ကို တစ်ချက်တည်း ထိုးချ လိုက်တာ မောင်လေးရင်ဘတ်အောင့်ပြီးခံစားသွားရတာ မိုးရင်ထဲ ခုထိစဉ်းစားမိရင် အရမ်းခံစားရ တယ်။နောင်လည်းဒီလို ဘယ်တော့မှလုပ်မဖြစ်တော့ဖူး။ ဒါတွေစဉ်းစားကြည့်ရင် မေတ္တာဆိုတာအ မှားတစ်ခုကို ထပ်ထပ်မကျူးလွန်ဖူးလို့လည်း ခံစာမိပြန်ပါတယ်။
နောက်ညီမအငယ်ဆုံး သူကတော့ ဘယ်ကျူရှင် ပဲထားထား မိုးကစာဝိုင်းကျက်ပေးမှရတယ်ထင် ဒါလည်းအစွဲတစ်ခုပါ။ ဒါနဲ့ ညီမက ၁၀တန်းရောက်သူ့ ကိုစာကျက်ပေးရင်း သူကစာမရသေးတော့ အေး ဒီပုံစံနဲ့ ဆို ၁၀ တန်း ၁၀ နှစ်ဖြေတောင်အောင်မှာ မဟုတ်ဖူးလို့လွတ်ထွက်သွားမိတယ် ပြောပြီးပြီးချင်း မှားမှန်းသိတယ် ဖြစ်စေလိုတဲ့ဆန္ဒမပါခဲ့ပေမယ့် တစ်ဖက်သားတော့ အတော်ခံစားသွားရမှာသေချာပါပဲ။ မိုးကစာရလွယ်မေ့လွယ်ပေမယ့် ညီမကတော့ ရပြီးသား မမေ့တတ်တဲ့သူ။ မိုးထက်လည်းများသာပါတယ် ထူးချွန်ပါတယ်။ မိုးရဲ့ မှတ်မှတ်ရရ အမှားတွေပါ။
ကိုယ်တိုင်မေတ္တာရှိတဲ့သူပေါ်တောင် မမျှော်လင့်ပဲ အမှားတွေလုပ်ခဲ့မိဖူးတာပါ။ အမေ့ပေါ်လည်း ဒီလိုပါပဲ ငယ်ငယ်ကတော့ အမေကလေးမှားလာတာမှတ်လား အမေကို အမြဲစခဲ့မိပါတယ်။ မိဘအရင်းနဲ့တွေ့ ချင်လိုက်တာ အဲ့လိုပြောလည်း အမေဘာမှအပစ်မယူခဲ့ဖူး စဉ်းစားမိတိုင်း သနားမိပါတယ်။မိဘဆိုတာ အတိုင်းဆမဲ့ ခွင့်ှလွှတ်ခြင်းတွေအပြည့်ရှိနေတတ်တာမျိုးပါ။
ညီမအလတ်ကိုတော့ မိုးကြောင့်ရေနွေးပူလောင်ခဲ့ဖူးတာ စဉ်းစားရင် အရမ်းကြောက်မိတယ် ကံကောင်းလို့ရှပ်ထိပေမယ့် ပူတာကတော့ပူခဲ့ဖူးတယ် ခုစဉ်းစားမိရင် သူ့ ကိုတောင်းပန်ခဲ့မိရဲ့ လားသတိမရတော့ဖူး။ အဲဒီချိန်မှာ အရမ်းထူပူနေခဲ့မိတဲ့ချိန်ပေါ့...
ဒါတွေဘာလို့ ရေးမိလည်းဆိုတော့ မေတ္တာဆိုတာ အခြေခံ ခံစားချက်ချင်းတူလိမ်မယ်လို့ခံစား မိလို့ပါ။
ဘယ်လိုမေတ္တာမျိုးဖြစ်ဖြစ် ၅၂၈ ဖြစ် ၁၅၀၀ ဖြစ်ဖြစ် အခြေခံကတော့ မိမိမေတ္တာရှိတဲ့သူအပေါ် နည်းနည်းလေးမှ ခံစားမှူဒုက္ခ ထိခိုက်မှူတစ်စုံတစ်ရာ နှစ်နာမှူ ဘယ်သောအခါမှမပြုလုပ်ဖူး ဆိုတာသေချာတဲ့အချက်တချက်ပါ။
မိမိကိုယ်တိုင် မေတ္တာကိုသိမှ မေတ္တာတရားရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်နိုင်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။
မေတ္တာတွေကဘယ်လောက်ဝေးဝေး စိတ်တွေကအရမ်းနီးနေတာ နိုင်ငံတွေဝေးမှ ထူးဆန်းစွာ ပိုသိလာရတာ ငယ်ငယ်လို ကဗျာသိ သီချင်းသိမဟုတ်ပဲ လက်တွေ့ခံစာချက်တွေက ဘဝရဲ့အလင်းတန်းတွေပါပဲ။ မိုးဒီမှာ အမှတ်တမဲ့ ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ် အိမ်ကစိတ်ပူမှာဆိုးလို့မိုးဖုန်းပိတ်ထားမိပါတယ်။ မိုးမှာက ဓါတ်အားသွင်းဖို့ အမြဲမေ့တတ်တာ အိမ်ကသိနေတာ သူတို့ဒီလိုပဲထင်လ်ိမ့်မယ်ပေါ ဒါပေမယ့် အိမ်မှာ အမေကနေလို့ မရဖူး အိမ်ကလူတွေလိုက်လာဖို့ထိစိတ် ဆန္ဒဖြစ်နေတဲ့ချိန် မိုးဆေးရုံရောက်နေတဲ့ချိန် သူတို့ ပြောတာ နားထောင်မိပြီး စိတ်တွေရဲ့မြန်နှုန်းသေချာနာလည်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။
ဒါတွေပေရှည်ပြောနေဒါကလည်း ခန့်မှန်းရခက်တဲ့ ခံစားချက်တွေအောက်မှာ လဲပြိုနေ ကြေကွဲကြ တဲ့မြင်ကွင်းတွေ ငရဲဆိုတာ သိထားတာက အဖန်ဖန်သေနေရတာ ဒါကကြားဖူးတာပါ ခုတော့ အဖန်ဖန် ကွဲကြေနေကြတဲ့ နှလုံးသားတွေကိုတွေ့ မိရင်း သြော် ငရဲမှာလည်း ဒီလိုပဲ အဖန်ဖန်သေလိုက် ရှင်လိုက်ဆိုတာလက်ခံမိပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်သမျှ တွေ့ သမျှ ကြားရသမျှဟာ မဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်အောင် ရက်စက်မှူတွေကကြာက်စရာကောင်းလှပါတယ်။ မိမိမှာ အိမ်ထောင်ရှိရက်နဲ့ ဒီိမှာလူလွတ်ဟန်ဆောင်ပြီး နောက်တစ်ယောက်နဲ့ တွဲတာဟာ မိမိဇနီး သားသမီး အပြင် တစ်ဖက်က သူပါ အများကြီး ထိခိုက်တာပါပဲ အချိန်ဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝပါပဲ။ သူတစ်ဖက်သား အချိန်ကို လည်ဖျားတာဟာ သူ့ ဘဝကိုလည့်ဖျားတာနဲ့အတူတူပါပဲ။
မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားက ကြီးမားလွန်းလှပါတယ်။ တုနှိုင်းစရာမရှိပါဖူး။ အမေဆိုတာလည်း မိမိကို အသက်စွန့်ပြီးမွေးခဲ့တာပါ။ မိခင်တိုင်းက အသက်စွန့် ရတာပါပဲနော်ဒီလိုဆို မိမိဇနီးကလည်း မိမိသားသမီးတွက် အသက်စွန့်မွေးပေးရတာပါပဲ။ ဒါလေးတစ်ချက်လောက် စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ (မိခင်နဲ့ ဇနီးကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းမဟုတ်ပါ)
ဖခင်ဆိုတာလည်း သားသမီးတွက် အချိန်နဲ့ ဘဝ အသက်တွေရင်းးထားရတာပါပဲ။ဒီလိုပါပဲ နော် ခင်ပွန်းဆိုတာလည်း ဖခင်ငွေရှာသလိုပါပဲ စိတ်မပင်ပန်း လူမပင်ပန်းပဲရလားတာမရှိပါဖူး။လောကမှာ မေတ္တာအတုစစ်ခွဲရခက်လောက်အောင် ဟန်ဆောင်မှူတွေကောင်းနေလို့များလိမ်ခံထိတာဆိုရင် လူသားတိုင်းမိမိနဲ့ မသင့်တော်သောသူများနှင့် မတွေ့ ရ မဆုံရ၊ တွေ့ ဆုံခဲ့သော် ဝေးသွားပါစေလို့ တောင်းဆုပြုမိပါတယ်။ တွေ့ မြင်ရ ကြားရတာ ပြောရမယ်ဆို အတော်စိတ်မကောင်းလွန်းလို့ ပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အစား မခံနိုင်လွန်းလို့ရေးရတာပါ။ ဘာဖြစ်ဖြစ် လူဆိုတာကတော့ မိမိစိုက်ပျိုးသည့်အတိုင်း ရိပ်သိမ်း ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဝဋ်ကြွေးမကင်းခဲ့လို့ ပဲဆိုရမှာပဲ။ ဖြစ်သမျှဝဋ်ကြွေးကြီးပဲပုံချပြီးနေရင်တော့ အဟောင်းတွေအသစ်တွေ သံသရာကွင်းစက်ကလွတ် ကင်းနိုင်တေ့ာမှာမဟုတ်တော့ပါဖူး။ ကံတရားဆိုတာလည်း တကယ်တော့ ကောင်းဖို့ ဆိုးဖို့ ကို ကိုယ်ကပဲဖန်တီးခဲ့ကြမိတော့ အတိတ်ဘဝတွေတော့ မသိပေမယ့်ယခုဘဝတွေမှာတော့ တက်နိုင် သလောက် ထိန်းဖို့ တစ်ခုပဲလုပ်နိုင်တာပါ။
ဒီစာဖတ်ပြီး တစုံတရာ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ခဲ့သော် တောင်းပန်ပါ၏။ အမှားရှိခဲ့လျှင်လည်း ခွင့်လွတ်ကြပါ။ ပြင်ပေးစရာ များရှိလည်း ဆုံးမခဲ့ကြပါ။ စာလုံးပေါင်းလည်းအလွန်မှားတတ်ကြောင့် ကြိုတင်တောင်းပန်ပါသည်။
စကားလုံးများရင့်သီးခဲ့သည်ရှိသော် အညွန့်ညွန့်တောင်းပန်ကြောင်းပါ။ မတတ်တစ်ခေါက်ဥာဏ် လေးဖြစ်ခံစားမိသလောက်ပါ။
၇ ရက်သားသမီးများအားလုံး စိတ်ရောကိုပါအေးချမ်းပါစေ...
Posted by noblemoe at 12:18 AM 12 comments:
သီတင်းကျွတ် ကန်တော့ပန်း _/\__ _/\__ _/\__
ကျေးဇူးကြီးမားလှသော အနန္တော အန္တငါးပါးနှင့်တကွ အနမတဂ္ဂသံသရာမှ ယခုမြတ်မှောက်ဘဝတိုင်အောင် မိမိထက် ကြီးသူ ငယ်သူ ရွယ်တုတန်းတူတို့ပေါ်တွင်လည်းကောင်း သီလ သမာဓိ ပညာရှိသော သူတော်စင်ပေါ်တွင်လည်းကောင်း ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ တပါးပါးသောကံဖြစ် ပစ်မှားကျူးလွန်ခဲ့သည်ရှိသော် ထိုအပစ်တို့မှ သည်းခံပါရန် ကျေအေးပါရန် ခွင့်လွှတ်ပါရန် ဝန်ချ တောင်းပန်ကတော့ပါ၏။ သည်းခံတော်မူပါ ကျေအေးတော်မူပါ ခွင့်လွှတ်တော်မူပါရှင်းးးးး
၇ရက်သားသမီးးများအားလုံး စိတ်ရောကိုပါကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ သီတင်းကျွတ်ရက်မြတ်ကိုပိုင်နိုင်ကြပါစေ….
Posted by noblemoe at 9:10 PM 10 comments:
ဒီနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့အမ်အာတီကတော့လူများမည် နေရာတနေရာရရင်တော့ကောင်းမည်တွေးရင်း ကံကောင်းတော့ နေရာက ရပြီသို့နှင့် မျက်စိမှိတ်ကာ မှေးတော့မည် မျက်လုံးလေးအသာမှိတ် ထို့ နောက် မျက်လုံးတစ်ချက်ပြန်ဖွင့်မိသည်။ မျက်စိရောက်သွားသည်မှာရှေ့ကဖြူရောင်ဖိနပ်ဆီသို့ ………….
ဖိနပ်ဖြူရောင်လေးသည် သက်သောင့်သက်သာဖြစ်မည့်ဟန်ပေါ်သလို ဒီဇိုင်းလည်းရိုး ရှင်းပြီးလှသည်။ တွေးရင်း အပေါ်သို့တစ် ချက်မော့ကြည့်မိချိန် ဟောမျက်ရည်များပေါက်ပေါက်ကျနေသော မျက်နှာကို ကြည့်မိသဖြင့် ဘာကြောင့်ငိုတာလည်း လူတွေများ ကြီးရှေ့မှာ ငိုရလောက်အောင် သူမမှာဘာများဒီ လောက်ခံစားနေရလဲ သူမမိသားစုဝင်များ… ဒါမှမဟုတ် သူမစာမေးပွဲရည်မှန်း ချက်များလွဲလို့လား….. တွေးရင်း ကြည့်မိတာသိရင်သူမရှက်သွားမလား မျက်လုံးပြန်မှိတ်သို့ သော စိတ်ကမနေနိုင်ပြန်ကြည့် မိပြန်သသည် သူမမျက်ရည်များအဆက်မပျက်စီးကျနေဆဲပင်……..
စိတ်ထဲမနေနိုင် အင်းထစ်ရှူးပေးလိုက်ချင်မိ သူမအိပ်ထဲလက်တစ်စုံတစ်ခုရှာနေသည် အင်းထစ်ရှူးပဲနေမှာ သူမမှာထစ်ရှူးမပါ သူမလက်ချောင်းလေးများဖြစ်မျက်ရည်များသပ်ချလိုက်သည်။ အိပ်ထဲမှာ ထစ်ရှူးကိုထုပ်လိုက် အိုမဖြစ်သေးဖူး သူမရှက်သွားမလား ဟူးးးးးးးးစိတ်ထဲမကောင်းဖူး မှေးချင်သောစိတ်ဘယ်နားရောက်သွားမှန်းမသိ….ဆင်းရတော့မည်။
ညီမ ရှေ့တိုက်က တိုက်ပေါ်ကခုန်ချလို့လာသွားကြည့်ရအောင်……
အိမ်ရှေ့မျက်စောင်းထိုးနားမှာ အဝါရောင်ကြိုးများကာထာလျှက် လူအုံနေသည်။ မိသားစုဝင်များ သေသူ၏နံဘေး ငုတ်တုပ်လေး တွေသာအပေါ်ကမြင်ရသည်။ ရင်ထဲမခံစားနိုင် ဆက်မကြည့်ချင် အခန်းထဲပြန်ဝင် ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေရလောက်အောင် သူ့ မှာဘယ်လောက်များစိတ်ခံစားမှူတွေရှိလဲသူသာသိဆုံးပါ။ အပစ်မယူလိုပါ။ အသက်စွန့်ရ အောင်နာကျင်ထိခိုက်မှူမျိုး သူခံစားရလို့ သာ…..သူထွက်ပေါက်ဟာ ဒါကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်မှတ်ပြီး သူရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်မည်လား။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသည် သူ့ ခံစားချက်ကိုသိလျှင် နားလည်ပေးမည် အားပေးမည် ဝိုင်းကူဖြေရှင်းပေးလျှင်သူ ဒီလိုဖြစ်ပါ့မလား အတွေးတွေစုံလာသည်။
အသက်ရှင်နေရတဲ့အချိန်တိုလေးမှာ ဘာလို့ များ သူတဖက်သား အသက်စွန့် သွားရလောက်အောင် ခံစာမှူတွေပေးကြတာလဲ လောကမှာဘာလို့ များသူတဖက်သား ထိခိုက်သွားမည်ဆိုတာ နည်းနည်း လေးမှမတွေးကြတလဲ သူ့ မိသားစုဝင်တွေအတွက်လား ရည်မှန်းချက်တွက်ပဲလား အကြွေးတွေတွက်လား လောကကြီးကိုလက်မြှောက်အရှုံးပေးသွားရလောက်အောင်သူ့ကိုဘာအရာကများ တွန်းအားပေးခဲ့တာလဲ.. တွေးရင်းးး
လောကကြီးမှာ မိမိကသူတပါးပေါ်မထိခိုက်အောင် ကံသုံးပါးထိန်းရသလို
မိမိပေါ် သူတပါးမထိခိုက်နိုင်အောင်လည်း နေရပြန်တယ်။
သည်းခံနိုင်သလောက် သည်းခံနားလည်းပေးနိုင်သလောက်နားလည်ပေးဖြည့်တွေး ဒါမှအဆင်မပြေနိုင်သေးရင်
ခက်တာက သက်စွန့် ပြီးလွတ်မြောက်အောင်ရွေးခဲ့တာတွက်စိတ်ထဲမကောင်းခဲ့ဖူး။
P.S ညကတစ်ညလုံးအိပ်မရပါ။ အရှေ့ မှာ...
Posted by noblemoe at 9:45 PM 10 comments:
*** မြစ်ဧရာ ***
Posted by noblemoe at 9:32 PM 15 comments:
ငယ်ငယ်က အဖေဝယ်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ပန်းကုံးလေးနဲ့ ရေဖလားလေးကိုလွမ်းတယ်။
ဘော်လုံးလေးတွေထဲ ရေထည့်ပြီး ရေကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ကလေးဘဝကိုလွမ်းတယ်။
နံနက်စောစော ပိတောက်ပန်း လာပို့တဲ့ လမ်းထဲက ကလေးလေး တပည့်လေးကိုလွမ်းတယ်။
တစ်အိမ်နှင့် တစ်အိမ် အပြန်အလှန် မုန့် ပို့ ခဲ့ဖူးတဲ့ မြန်မာတို့ ရဲ့အလေ့အထလေးတွေကိုလွမ်းတယ်။
မောင်းသံတညံညံနဲ့ သရက်သီးဆားရည်စိမ် မရမ်းသီးတွေရောင်းတဲ့ တွန်းလှည်းကြီးကိုလည်းလွမ်းတယ်။
ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့ ဆရာမ သူငယ်ချင်းတွေရယ် ကျောင်းအဝင်ဝက ဂန္တဝင်ဆိုင်ရဲ့ မျိုးကြီးသီးချင်းသံ မေ့မရ ဆုံနေကြ ရွှေတြိဂံဆိုင်က စိုးမြင့်ကြော်၊ လက်ဖက်ထမင်းးသုပ်နှင့်အတူ ကျောင်းသင်္ကြန်ကိုလည်းလွမ်းတယ်။
၃ နှစ်တာ သင်္ကြန်ဆိုတဲ့အနှစ်သာရနဲ့ကွဲကွာနေပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာမြင်ခွင့်ရ ကြားခွင့်ရလည်း ဒါဟာ ပျော်ရွှင်ခြင်းတစ်မျိုးမို့မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်မှာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးဘေးကင်းရန်ကွာ အနှောက်အယှက်ကင်းကင်းဖြစ် ပျော်ရွှင်စွာ ရေပက်ကစားနိုင်ကြပါစေရန် ဒီနေရာကနေပဲ ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။
စာလာဖတ်သူ မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ အားလည်း ဒီနေရာလေးကပဲ ငွေဖလားကြီးထဲက နံသာရေလေးနဲ့ ရေခဲရေ ကိုအောင်သပြေခတ်က လေးနဲ့ ပက်ဖြန်းလိုက်ကြောင်းပါ။း))))) အားလုံး မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်လေးနှင့်အတူ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ရက်များကိုပိုင်နိုင်ကြပါစေ....
Posted by noblemoe at 3:32 PM 14 comments:
တွေ့ ဖူးသမျှ (၁)
တွေ့ ဖူးသမျှ (၁) အဆက်ပါ။
ကမ္ဘာကြီးတစ်ပတ်လည်သလို သံသရာကြီးတပတ်လည်ပြန်သည်။ ပျော်နေသောမိသားစုလေး သားသမီး တွေတွက်ထားခဲ့သောရည်မှန်းချက် စိတ်ကူးအိမ်မက်များ ဒီနေ့ပျက်စီးခဲ့ပြီ။ စားပွဲပေါ်တွင်တင်ထားခဲ့သော စာကိုဖတ်မိရင်း လုပ်ရက်လိုက်တာသမီးရယ် …..
အိုး မျက်ရည်ကျလို့ မဖြစ်ဖူး မိဘမျက်ရည်တစ်စက် သားသမီးဆင်းရဲ့တစ်သက် တဲ့ မဖြစ်ဖူး မဖြစ်ဖူး ငါ့သမီးလေး ဘေးတွေ့ နေပါအုံးမယ်။ ရင်ထဲစို့ နစ် စိတ်ထောင်းတော့ကိုယ်ကျေဆိုသလို အိပ်ယာထဲဘုန်းဘုန်းလဲ ရတော့ သည်။
အတွေးများအတိတ်ဆီသို့အော်တစ်ချိန်က ကျွန်ုပ်ဒီလမ်းလျှေက်ခဲ့ဖူးစဉ် မိခင်အိပ်ယာထဲလဲ နှစ်အနည်းငယ် တွင်း အသက်သေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ကို တွေးမိသည်။ ချက်ချင်း အိပ်ယာမှထ သမီးလေးကိုရှာမှပဲ ဖြစ်လာမှ တော့ အကောင်းဆုံး မိဘတို့ တာဝန်ရကောင်းဆုံးသာ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ သမီးလေးနေရန်အိမ် လုပ်ငန်းကစတည်ထောင်ပေးသည့်ပြင် နွေးထွေးသောမိဘမေတ္တာကို အစဉ်ပေးလျှက်သာ........
ရှေ့ ပိုင်းက တန်းလန်းဖြစ်နေတာကြောင့် အကျဉ်းချုပ်သာရေးလိုက်ရပါသည်။ စာများအစီစဉ်မကျမှုကို သည်းခံဖတ်ပေးကြသော စာဖတ်မိတ်ဆွေများကို အထူးကျေးဇူးတင်လျှက်ပါ။ မိုးက လက်တွေ့ ဘဝလေးတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားတတ်သူပါ။ ကျောင်းစာကလွဲရင် တခြားစာဖတ်တာ အလွန်အလွန်ကိုနည်းခဲ့တာ မိုးရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုပါ။ ရေးချင်ပေမယ့် အစဉ်ပြေအောင်မရေးတတ်သေးပါ။ သို့သော် စာရေးချင်စိတ်ကလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကလိုတော့ဟုတ်ဖူး ခုတော့စာဖတ်တာက အဖော်လိုဖြစ်လာပါတယ်။ မအားတာကြောင့် ရေးမယ့်စာကို အရှည်မရေးလိုက်နိုင်ပါဖူး။ ခွင့်လွတ်ပေးကြပါ။း)
၇ ရက်သားသမီးများအားလုံး စိတ်ရောကိုယ်ပါ အေးချမ်းလို့ 
Posted by noblemoe at 11:03 AM6comments:
မိုးခါးလေး တဂ် လိုက်တဲ့ပိုစ့်ပါ။
မိုးနာမည်အရင်း " မိုး "ပါ။ မိုးတစ်လုံးတည်းတော့ဟုတ်ပါဖူး။ အဖေက ဘယ်လိုရည်ရွယ်ပေးတယ်တော့မသိပါဖူး ကိုယ်ကိုယ်တော့ ရွာနေတဲ့မိုးကိုမရည်ရွယ်ပါ။ မိုးမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းသင်း တွေကြားခွဲခွါရ တိုင်းမိုးအမြဲပြော လေ့ရှိတာက မိုးကိုသတိရရင် မိုးသားကြီးကိုမော့ကြည့်လိုက်ပေါ့လို့အမြဲပြောလေ့ရှိပါတယ်။
အဖေ ကတော့ အမြဲသမီးပဲခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတွေကို မိတ်ဆက်ပေးချိန် သမီးကြီးပါ။ အဖေ့ရဲ့သမီးလို့ ခေါ်တဲ့အသံကကို အရမ်းလည်းနှစ်သက်သဘောကျမိပါတယ်။ အဖ့ခေါ်သံတွေထဲမှာ ဂရုဏာသံ လေးတွေပါ နေလို့ ပါပဲ။ တခါတခါလည်း မောင်နှမတွေခေါ်သလို မမကြီး ထည့်ပြောမိတတ်ပါတယ်။ မမကြီးကတော့ တော်တော့်ကို တွင်သွားတယ် ဆိုရမှာပါပဲ။ အဒေါ်အိမ်သွားလည်လည်း အဒေါ်ယောက်ခမ အိမ်က မိုးကိုခေါ် တာ မမကြီးပါပဲ။ မိုးကပြန်ခေါ်တာ အဖိုးနဲ့အဖွားပါ။
အမေကတော့ သမီးခေါ်ပေမယ့် နာမည်ခေါ်တာသာများခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ကြည့်မရရင် ရောဂါသည်တဲ့ ။
အဒေါ်တွေ ဦးလေးတွေကတော့ နာမည်ပဲခေါ်ပါတယ်။ ဦးလေးတွေက တစ်ခါတစ်လေ ပဲပင်ပေါက် ပဲပြား ခေါ်ပါတယ်။ ဘလို့ခေါ်လဲတော့ စဉ်းစားသာကြည့်ပါတော့နော်း) တစ်ခါတစ်လေ တစ်ဦးအရူးတဲ့ အရူးမတဲ့ အပေါမ ပေါတောတော ငပေါမကြီး ခေါ်ချင်သလိုခေါ်ကြပါတယ်။ မိုးကလည်း ကိုယ့်နာမည်မခေါ်ရင် စိတ်သာချ ပြန်မထူးတတ်ပါဖူး။ ဒါနဲ့ မေးကြည့်တော့ တစ်ဦးကလေးကို အရူးအမူးချစ်ကြလို့တစ်ဦးအရူးခေါ် တတ်ကြ တယ်တဲ့ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိပါး)
မောင်နှတွေမှာတော့ အကြီးမို့မမကြီးပေါ့။ ညီမတွေကတော့မမိုး မောင်တွေကုန်လုံးမတော့ မမကြီး မိုးမှာ တစ်ဦးတည်းသောမောင်လေးကလွဲလို့မိုးနဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကျော်ကွာတဲ့မောင်လေးကနေ ခု သူငယ်တန်းက လေးမောင်ထိဝမ်းကွဲတွေရှိပါတယ်။
ကျောင်းမှာတော့ မှတ်မှတ်ရရ မသုဓမ္မစါရီလို့တော်တော်နာမည်တွင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါနဲ့နောက် နောက်တစ်နှစ်နှစ်ကျ ကတုံးမြင်ပြန်တော့ ပိုဆိုးပေါ့။ တစ်ခါ မိုး ၁၀ ပြီတော့ အတန်းထဲကကျောင်း သားတစ်ယောက် မနေနိုင်လိုက်မေးသေးတယ် ဆံပင်တုလားတဲ့ အော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ သူမေးတာကို ရီပဲနေလိုက်မိပါ တော့တယ်။ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေခေါ်တာ တော့ မိုးလေး ပါ ။တစ်ခါမြတ်မွန်ကမိုးလေးလို မန့်တော့ ငယ်သူငယ်ချင်းအရင်းခေါ်လိုက်ပျော်မိပါတယ်။
လမ်းထဲက ကလေးတွေက မမမိုးတဲ့ ကော်မန့်လာပေးတဲ့ သူထဲမှာ မမမိုးလို့ မြင်မိရင် အဲ့ဒီကလေးကို အရမ်းသတိရ ပါတယ်။
ခုအကိုတွေ အမတွေက ခေါ်တာလည်း မိုးပါ။ မမိုးလို့ လည်းခေါ်တတ်ပါတယ်။ ငယ်တဲ့သူမတတ်ခေါ်တာ နှစ်သက်ပေမယ် အကိုကြီးကြီးတွေ မတတ်ခေါ်ရင် တမျိုးကြီးပဲ။ ပြောရင်တော့ လေးစားသမှုနဲ့ပေါ့ ပြီးတော့သူတို့ ကိုယ်သူတို့ နုချင်တာပါ။မောင်လေးတစ်ယောက်က တစ်ခါတခါမက်စေ့ပို့ တတ်တယ် အဖွားမိုးတဲ့ အေးရော။ နောက်မောင်လေးတစ်ယောက်ကခေါ်ပါတယ် ဂျီးတော်မိုးတဲ့ကုန်ပါပြီ အရွယ်သုံးပါးးD
တခါကပလာဇာမှာ ဈေးသွားဝယ်တာ ဆိုင်ထဲက အသက် ၆၀ ကျော်လောက်ရှိမယ် မိုးကိုခေါ်လိုက်ပါတယ် အမတဲ့းD
မိုးကပြန်ညီမလေးလို့ ခေါ်ရတာလည်းခက်သား အမေ့ထက်ကြီးမယ့်ပုံဆိုတော့ လောကကြီးမှာခုထိ မိုးလိုက်ရောညီထွေ မနေတတ်သေးပါ။
အဆောင်ကအမတွေကတော့ ရုံးကပြန်လာလို့ဟင်းအဆင်သင့်ချက်ထားရင်ဖြစ်ဖြစ် လက်ဖက်သုပ်ပေးရင်ဖြစ်ဖြစ် ခေါ်တတ်တယ် ချစ်မိုးတဲ့ သူတို့ လိုတာလေးတွေဝယ်လာပေးရင် မေမိုးတဲ့ တစ်ခါတလေ မမိုးလေးတဲ့ တစ်ခါတစ်လေ သူတို့ ပြောတာနားမလည်ရင် တော်ပြီဒီပျိုကြီးကို ပြောတော့ဖူးတဲ့လေ။ အပျိုမကြီးသေးဖူးဆို ဒါဆိုပျိုလေးလို့ ရွဲ့ တဲ့တဲ့ခေါ်သေးတယ်။ ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်ပါ မိုးစိတ် မဆိုးတတ်ပါဖူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီ ဘလော့နာမည်နဲ့ပက်သက်ပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်ဖူးတာတော့ရှိပါတယ်။
ဒီဘလော့နာမည်လေးကိုပေးခဲ့တာ မိုးကိုယ်တိုင်လည်းနှစ်သက်တယ် မြတ်နိုးပါတယ်။ တခါ ဒီနာမည်နဲ့ပက် သက်ပြီး ခနဲ့တဲ့တဲ့ရေးသွားဖူးတာတွေ့တော့ အတော်စိတ်မကောင်းဖူး ကိုယ့်ဘလော့ မှာရေးတာတော့ဟုတ်ပါဖူး ဘယ်သူဆိုတာကိုတော့မိုးလည်းမသိချင်ဖူး။ နောက် မိုးကော်မန့်ရေးတာမဟုတ်ပဲ မိုးနာမည်နဲ့တွေ့ လို့ အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဖူးတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင်လည်း တဖက်သားဝမ်းနည်းမိအောင်မရည်ရွယ်လည်း တဖက်သားကဝမ်းနည်း သွားတာမျိုးရှိတယ်။ ဘာဖြစ်ဖြစ် တိုတောင်းလှတဲ့ဘဝထဲမှာ အေးချမ်းချမ်း လေးပဲဖြတ် သန်းသွားချင်မိပါတယ်။
ခါးလေးရေးပြီးသွားပြီးနော်။ သူ့ လိုတော့ ကြွားစရာတစ်နေရာ ရောင်လို့တောင်မရှိပါ။ မမူးသေးဖူးနော် ဟွန့့်် ဒက်ပေါက်တယ်ဟုတ်းD
Posted by noblemoe at 3:40 PM7comments:
ဒီနေ့ အတန်းလစ်ပြီး သူငယ်ချင်းတစု ဘုရားသွားဖို့ တာဆူနေကြသည်။ ဒီနေ့ကျနော့ဘဝတစ်ခုလုံးတွက် အမှတ်တရဆုံးနေ့ပင်။ အေးချမ်းသော ဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ်တွင် ကိုယ်စီဘုရားဝတ်ပြုနေသည်ကြားမှ ကျနော် သတိပြုမိသူကား ဘုရားဝတ်ပြုတာမတွေ့ သို့ နှင့် ကျတော် သူမဝတ်ပြုတဲ့ချိန်မတွေ့ မိတာနေလိမ့်ဟု တွေး လိုက်မိသည်။ ထိုနေ့မှစ ကျနော်သူမ၏ပုံရိပ်များ မေ့မရ ကျနော်ရင်ထဲ နောက်ကြိမ်ပြန်ဆုံအောင် တောင့်တ နေမိသည်။
ကမ္ဘာကြီးကျဉ်းလွန်းသည်ဆိုတာ ကျနော်ယုံပြီ။ ကျနော့်၏ပြင်းပြသောခံစားချက်ကြောင့်လား ကျနော်တို့ ရေစက်ရှိသောကြောင့်လား ကျနော်သူမကို နောက်တစ်ကြိမ်ဆုံပြန်ပြီ။ ကျနော့သူငယ်ချင်းကျောင်းလိုက်လည် သည့်နေ့ပင်။
"မ" သည်ကျနော့ထက် အတန်းကြီးယုံမက ထက်မြတ်သွက်လက် သောမိန်ခလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကျနော်ကလေးဆန်လွန်းသ လောက် "မ" အရာရာစေ့စပ်သေချာလုပ်ကိုင်တတ်သူ။ "မ" အချစ်ကို ကျနော့်ရဖို့ ခက်ခဲလွန်းလှသည်။ သို့ သော် ကြိုးစားသမျှအရာ ထင်လာခဲ့ပြီ "မ" အချစ်ကို ခက်ခဲစွာရပြီး "မ"ကျနော့ကို လက်ခံတာဘယ်တော့မှ နောင်တမရစေရဖူး ယုံကြည်ပြီးလက်ခံပေးတဲ့ "မ" တွက် "မ" ယုံကြည်မှုကိုမှန်ကန် အောင် ကျနော်ဘဝနဲ့ရင်းပြီးသက်သေတည်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အခက်ခဲမှုန်တိုင်းက "မ"နဲ့ကျနော့်ကြား အဖြေမပေးခင်တည်းကရှိနေတာ ချစ်မိခဲ့ပြီးမှနောက်မ ဆုတ်နိုင်ပဲရှေ့တိုးမိတဲ့ ကျနော် အရာရာရင်ဆိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ပြီးမှ ရှေ့တိုးခဲ့မိလို့မည်သို့ ပင်ခက်ခဲသော်လည်း ကျနော်နောက်မဆုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးသာ။ အကြောင်း ကား နှစ်ဖက်မိဘလက်မခံနိုင်သော အခြေနေပင်။ မိဘတွေအပစ်မဟုတ် ကျနော့်နှလုံးသား၏ တောင်းဆိုခြင်းကိုကျနော် မတားနိုင်ခြင်းသာ။
"မ"ကိုအိမ်ထောင်ချပေးတော့မည့်သတင်း ကျနော့်ရင်ထဲ ပူလောင်လွန်းလှသည်။ ကျနော် "မ"ကို အဆုံးရှုံး မခံနိုင်ဖူး။ တစ်ခုတည်းသောနည်းက ခိုးပြေးရန်သာ။ မိဘအဆင်ပြေအောင်ညှိလို့ မရသည့် ဘာသာရေး ကခြားနားနေတော့ ဒီနည်းအပြင်ရွေးစရာလမ်းမရှိချေ။
ကံဆိုးရွားလွန်းသည့် ကျနော်တို့ နှစ်ဦး "မ"ကို သွားခေါ်ရာ လမ်းထိပ်တွင်ပင်မိလေသည်။ "မ" အကိုမောင် သူငယ်ချင်းတစ်ခုလက်ချက် ကြောင့် ကျနော် မသေရုံတမယ်။ ပြင်းဖျားတွေတက်တာတောင် "မ"ကိုသာ ယောင် ရမ်းခေါ်နေမိသည်။ ကျနော့မိသားစု ကျနော့်ကို နောက် ဆုတ်ဖို့ ထားနေရက်ကျနော် နှလုံးသားထဲရှိသူနဲ့သာ ကျနော်ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ချင်တာ အပြစ်လား။ကျနော်လဲလို့မဖြစ်ဖူး အိပ်ယာ ထဲကုန်းရုံးထ "မ"သူငယ်ချင်း များကို ကူညီတောင်းသော်လည်း "မ" ကိုနယ်ပို့ ထားမှန်းသိလိုက်သည်။
သတင်းစာဟောင်းတွေဝယ်တယ်။ ဒန်အိုးဒန်ခွက်တွေဝယ်တယ်။ အိမ်ရှေ့မှအထမ်းသည်ကို အဖွားက လှမ်းခေါ်လိုက်သည်။ ရှိသမျှသတင်း စာဟောင်းကို ယူကား ကျမ ရှေ့ထွက်လာစဉ် ခပ်နွမ်းနွမ်း ဦးထုပ် ငိုက်ငိုက်စောင်းထားသောသူက "မ"ခေါ်တော့မှ ကျမနှလုံးသားတစ်ခု လုံးအားအင်အပြည့် ပေါ့။
အဲဒီနေ့ ဘဝဆိုတာကို သုညကစ တည်ဆောက်ခဲ့ရသည့်နေ့ ငှက်ပျော်သီးတစ်လုံးဟာ ညစာအဖြစ်စားခဲ့ရတဲ့နေ့ ဘဝ၏ ခက်ခဲများ ကျုကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီး တစ်ဦးကိုယ်တစ်ဦးနားလည်မှုအပြည့်ဖြစ်ဖြတ်သန်းခဲ့ခြင်း နှစ်ဖက်သိုင်းဝိုင်းစာနားပေးထားခြင်းကြောင့် ကျနော်တို့ နှစ်ဦးဘဝအရာရာဟာသာယာစိုပြေလာသည်။
ခုတော့ သားသမီးများနှင့် ကျနော့်ကိုမိသားစု လေးတစ်ခုဖန်တီးပေးတဲ့ "မ" ပထမအရွယ်မှာ သွက်လက်ထက်မြတ် ပြီ ချစ်စရာကောင်းသလို ဒုတိယအရွယ်မှာ မိခင်တစ်ယောက်မေတ္တတွေဝေနေခဲ့တဲ့ အလှ တတိယရွယ်မှာ အေးချမ်းတဲ့ အပစ်ကင်းစင်လွန်းတဲ့ "မ" ရဲ့အလှတွေက ကျနော့်တွက်တော့ ဘုရားကပေးတဲ့ဆုလဒ်ကို မြတ်နိုးတဲ့ဆုလဒ်ပဲလား။
တွေ့ ဖူးသော မြင်ကွင်းတစ်စုံကိုပါ။ တကယ်ပြောချင်သောအကြောင်းကမရောက်သေးပါဖူး အလုပ်လည်း မအားတာကြောင့် ဒီနားတင်ရပ်ထားလိုက်ရခြင်းပါ။
Posted by noblemoe at 12:31 PM5comments: